We She Me: September 2009
အတူနေ လင်မယားတွေ အတွက် ပြောစရာ စကား ကုန်မယ် မထင်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ အတွက်လည်း ပြောစရာ မရှိ နောက်ကြောင်းပြန်ပြီး ငယ်ငယ်တုန်းက အကြောင်းတွေ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် အပြန်အလှန် ပြောဖြစ်ကြတယ်။ တိုက်တိုက် ဆိုင်ဆိုင် ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက် ပြောဖြစ်ကြတာ ငယ်ငယ်က ဘယ်လောက် ဆင်းရဲကြောင်း ပြောကြတယ်။ (ပြောသာပြောတာ အခုလည်း ချမ်းသာနေတာတော့ မဟုတ်ပြန်ဘူး။) ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့ ငယ်ဘ၀တွေက ရုပ်ရှင်တွေထဲကလို တဲပုတ်ကလေးနဲ့ မွဲတေ ဆင်းရဲ နေတာ မဟုတ်ပေမယ့် ရပ်ကွက်နေ လူတန်းစား လောက်ပဲ ရှိခဲ့တာပါ။ “ဟာ .. ဟုတ်လား.. ငါတို့ ငယ်ငယ်တုန်းကလည်း အဲဒီလိုပဲ” ဆိုပြီး ဘ၀တူ မပြည့်စုံပုံ တူကြပါတယ်။
ကျွန်တော်က သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ လက်ဘက်ရည်ဆိုင် ထိုင်တဲ့ အကြောင်း ပြောပြတယ်။ လက်ဘက်ရည် တစ်ခွက် နှစ်ခွက်တည်း မှာပြီး သူငယ်ချင်း ၄-၅ ယောက်လောက် စုထိုင်ပြီး စကားပြောကြ လမ်းပေါ်က ကောင်မလေးတွေ ငေးတဲ့ အကြောင်း၊ ပြီးတော့ အဲဒီ တစ်ခွက်ကို သူရှင်း ငါရှင်း အလှည့်ကျ ရှင်းတဲ့ အကြောင်း၊ ဒါမှမဟုတ် အားလုံး ၅ကျပ် ၁၀ ထည့်ပြီး ၀ိုင်းရှင်းကြတဲ့ အကြောင်း၊ ပြီးတော့ နောက်မှ ရောက်လာတဲ့ကောင်က သူမမှီလိုက်မှာ စိုးလို့ ရောက်ရောက်ချင်း လက်ဘက်ရည်ခွက်ကို ခွက်ကနဲ့ မော့သောက်တော့ အဲဒီခွက်ကလေးကို အလှကြည့်နေကြတဲ့ အားလုံးက ၀ိုင်းဆဲကြတဲ့ အကြောင်းတွေ ပြောပြတယ်။ အဲဒီလို ပြောပြလွန်းတော့ ကျွန်တော်က သူမကို သူငယ်ချင်း တစ်ယောက် မိတ်ဆက်ပေးရင် “အဲဒါ ညည်းနဲ့ လက်ဘက်ရည် တစ်ခွက်တည်း သောက်တဲ့ သူငယ်ချင်းလား”လို့ တိုးတိုး မေးတာ အကျင့် ဖြစ်နေတယ်။ ဘယ်လောက် အတိုင်းအတာအထိ ခင်ခဲ့သလည်း မေးချင်တာပါ။
နောက်ပြီး ကျွန်တော်က ၀င်ငွေ မကောင်းခင်အထိ ဆိုင်မှာ ကြေးအိုးဆီချက် စားဖူးတာ စုစုပေါင်း ၅ပွဲပင် မရှိတဲ့ အကြောင်းပြောပြတော့ သူမကလည်း မစားဖူး စားရကောင်းမှန်းပင် မသိကြောင်း ပြောပြတယ်။ ငယ်ငယ်က ရိုးရိုး ဆီချက်ခေါက်ဆွဲတော့ လူကြီးတွေနဲ့ လိုက်စားဖြစ်ပေမယ့် စတိုင်လည်းဖြစ် ဈေးလည်း ၂ဆပိုကြီးတဲ့ ကြေးအိုးဆီချက်ကိုတော့ စားဖြစ်တဲ့ အကြိမ်ပေါင်းက လက်ချိုးရေလို့ ရတယ်ဆိုတာ နှစ်ယောက်စလုံး ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ အခု ၀ယ်စားနိုင်တဲ့ အချိန်ရောက်တော့ အဲဒီလို ဆိုင်တွေ မရှိတော့ကြောင်း ပြောဖြစ်ကြတယ်။ ဒီမှာလည်း မြန်မာဆိုင်မှာတော့ ၀ယ်စားလို့ ရပေမယ့် ရန်ကုန်က ဆိုင်တွေမှာ ကိုယ်စားချင်တဲ့ အချိန် ပိုက်ဆံ ပေါပေါပဲပဲနဲ့ စားနိုင်တဲ့ ဘ၀လေးကို လိုချင်တာပါ။ အဲဒီလို ဖီလင်လေးကို လိုချင်တာပေါ့။
ငယ်ငယ်က အိမ်မှာ တီဗွီမရှိတော့ သူများအိမ်မှာ ကုတ်ကပ်ပြီး သွားကြည့်ရကြောင်း၊ ဘေးအိမ်က တီဗွီကို ပြတင်းပေါက် ၂ ပေါက်ကျော်ပြီး ကြည့်ရကြောင်းတွေ နောက်ကြောင်းပြန်ကြတယ်။ ကံကောင်းချင်တော့ ရှက်တတ်တဲ့ အရွယ်မှာ အိမ်မှာ ၁၄လက်မ Toshiba တီဗွီလေး တစ်လုံး ၀ယ်နိုင်လာတဲ့ အကြောင်းတို့ တီဗွီဝယ်တဲ့ နေ့တို့ဟာ နှစ်ယောက်စလုံး အတွက် မှတ်မှတ်ရရ ဖြစ်နေတာ တိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။ ဒီလို ငယ်ငယ်တုန်းက အဖြစ်အပျက်တွေ ပြန်ပြောင်းသတိရ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ပြောဖြစ်တာ ကြည်နူးစရာတော့ ကောင်းပါတယ်။
ငယ်ငယ်က ဂျင်းဂျာကင် (Jean Jacket) တစ်ထည်ရဖို့ ဘယ်လောက် ခက်ခဲကြောင်း ရလိုက်တဲ့ Joy တံဆိတ် ဂျင်းဂျာကင်လေးကို မမေ့တဲ့ အကြောင်းလည်း အခု Levi's ဘောင်းဘီ ၀တ်တိုင်း ပြောဖြစ်ကြတယ်။ အခု အသုတ်စုံ သုတ်စာရင်းလည်း ငယ်ငယ်က ဟင်းမလောက်ရင်ဖြစ်ဖြစ် ဟင်းမချက်ရင်ဖြစ်ဖြစ် ကြာဆံသုတ် တိုဟူးသုတ် ၀ယ်ပြီး ထမင်းနဲ့ စားတဲ့ အကြောင်းကလည်း ခဏခဏ ပြောဖြစ်ပါတယ်။ ငရုတ်ဆီနဲ့ ပဲမှုန့်နဲ့ နယ်ထားတဲ့ လက်သီးဆုပ်စာ အသုတ်နဲ့ ထမင်းတစ်ပန်းကန် လောက်အောင် ဘယ်လို စားကြောင်း ပြောတော့ သူမရဲ့ အဘွားက ကြည့်စားနော်ဆိုလို့ ကြည့်ပြီး စားတာ ထမင်းကုန်မှ အသုတ်ချည်းပဲ စားတဲ့ အကြောင်း ပြန်ပြောတယ်။
တကယ်တော့ ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လောက် ဆင်းရဲခဲ့ကြောင်း မပြည့်စုံခဲ့ကြောင်း ကို အခုလို တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ရင်းနီးသွားမှာ ပြောဖြစ်တာပါ။ သမီးရည်းစား မဖြစ်ခင်နဲ့ ဖြစ်ပြီးတော့လည်း သိပ်မပြောဖြစ်ခဲ့ဘူး။ ဦးပုညရဲ့ ရေသည် လင်မယားလို တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ဘယ်လောက် ဆင်းရဲကြောင်း (သူတို့အတွက်ကတော့ ဘယ်လောက် ကြွယ်ဝကြောင်းပေါ့) မယူခင် တုန်းက သေသေချာချာ မပြောဖြစ်ခဲ့ကြဘူး။ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ဘယ်လောက် ကြွယ်ဝကြောင်း/ဆင်းရဲကြောင်းကို မမေးခဲ့ မစုံစမ်းဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ ကျွန်တော် ၁၀တန်း အောင်ပြီးတော့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပေါင်းပြီး လက်ဘက်ရည်ဆိုင် တစ်ဆိုင် ဖွင့်ဖူးကြောင်း အရင်းပြုတ်ဖူးကြောင်းကိုလည်း သိနေပေမယ့် အဲဒီအချက်တွေက နှစ်ယောက် ပေါင်းဖက်ဖို့အတွက် သူမ ဘာမှ အရေးမထားကြောင်း သိရပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ၂ ယောက် တွဲနေပြီး နည်းနည်း ကြာတော့ သူငယ်ချင်းတွေက မေးကြတယ်။ “မင်းတို့ ဘယ်အခြေအနေ ရောက်နေကြပြီလည်းကွ”လို့ ရယ်ကျဲကျဲ မေးတော့ “အခုမှ Confidence Building Stage ကို ရောက်နေတာပါ” ပြန်ဖြေလိုက်တယ်။ တကယ်လည်း တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ယုံကြည်မှု (Trust) တွေ တည်ဆောက်နေတုန်းကပါ။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ဘယ်လောက် အတန်းအစား ရှိသလည်း ဘယ်လောက်ချမ်းသာ ဆင်းရဲသလဲ ဘယ်လို အသိုင်းအ၀ိုင်းကလည်း ဆိုတာ အပေါ်ယံ နည်းနည်းပါးပါး သိရရင် ကိုယ်နဲ့ အပ်စပ်တယ် ဆိုတာ သိနိုင်တော့ အတွင်းကျကျ မမေးဖြစ် မပြောဖြစ်ကြပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်ကြည့်တာ စိတ်ချင်း ပေါင်းဖြစ် မဖြစ်နဲ့ အနာဂတ်မှာ ဘယ်လို ဆက်လှမ်းကြမလဲက အဓိကပါ။ စိတ်သဘောထားချင်း မတိုက်ဆိုင်တဲ့ လူနှစ်ယောက် ရေရှည်ပေါင်းဖို့ မဆိုထားနဲ့ ခဏလောက် ပေါင်းသင်းကြည့်လိုက်ရင်တောင် အတူတူ တသားတည်း မဖြစ်နိုင်တာ သိသာတဲ့ အခါတွေ ရှိပါတယ်။
အဲဒီတုန်းက ဒီလို ငယ်ငယ်တုန်းက မပြည့်စုံတဲ့ အကြောင်းကိုလည်း တမင်တကာ ထိန်ချန်ထားကြတာ မဟုတ်ပေမယ့် မမေးဖြစ် မပြောဖြစ်ကြဘူး။ ယောက်ျားလေး တစ်ယောက်အနေနဲ့တော့ တစ်ဖက်က မိသားစု ချမ်းသာလား ဆင်းရဲလား သိစရာ တော်ရုံတန်ရုံ မလိုပေမယ့် မိန်းကလေး တစ်ယောက်အနေနဲ့တော့ ကိုယ်နဲ့ ပေါင်းသင်းမယ့်လူရဲ့ မိသားစု အကြောင်း သိချင်တာ သဘာဝ ကျပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူမက အဲဒီလို စပ်စပ်စုစု မေးမနေပါဘူး။ နောင်မှာ ဘာ Plan တွေ ရှိသလဲလောက်တော့ မေးပေမယ့် အဲဒီတုန်းက ပြောခဲတဲ့ Plan တွေမှာ အကောင်အထည် ပေါ်တာတွေ ရှိသလို မဖြစ်ထွန်းတာတွေလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။ (တချို့ဟာတွေကလည်း ကြားကောင်းအောင် ကြည့်ရွှေခဲ့တာတွေလေ..)
အခုတော့ ကလေးကလည်း ၂ ယောက်ရှိပြီဆိုတော့ ငယ်ငယ်က ဘယ်လို ဆိုးပေတဲ့ အကြောင်းပြောပြော ငယ်ငယ်က ဘယ်လို မပြည့်စုံတဲ့ အကြောင်း ပြောပြော ပစ်သွား ထားသွားမှာလည်း မဟုတ်တော့ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ပြောဖြစ်ကြတယ် ဆိုပါတော့။ ကံကောင်းချင်တော့ နှစ်ယောက်စလုံးက ဘ၀တူတွေ ဆိုတော့ အထူးအဆန်း မဟုတ်တော့ပေမယ့် ကြားရတာ သိရတာ ငယ်ငယ်ဘ၀ကို ဆွတ်ပျံ့ဖွယ်ပဲ ကောင်းပါတယ်။
43 comments | FLAGS: We
ဘွဲ့လွန် တက်သင့် မသင့် ပို့စ်တွေမှာ မှတ်မှတ်ရရ ပေါ်လီ ကျောင်းသား/ ကျောင်းပြီးထားသူ တချို့က သူတို့ရဲ့ အခြေအနေတချို့ကို Comment မှာ ပြောပြသွားပါတယ်။ အထူးသဖြင့်တော့ ပေါ်လီကျောင်းတွေမှာ တရုတ်လို ပြောတဲ့ ကျောင်းသား အများစုကြောင့် အင်္ဂလိပ် စကားပြော တိုးတက်သင့်သလောက် မတိုးတက်တဲ့ အကြောင်း ကိုယ့်ဘာကိုယ် လေ့လာရတဲ့ အကြောင်း ပါ။ စာဖတ်သူ အများစုက ပေါ်လီက မဟုတ်သော်လည်း ညီအစ်ကို မောင်နှများ အတွက် သိထားရင် ကောင်းမလားလို့ စုပြီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီပို့စ်မှာပဲ ထပ်ပြီး ပြောသွားလည်း ရပါတယ်။
Hi, I was graduated from Poly in 2003. I reached here in 2000 and I have been here for >9 years. Frankly, not all poly students' english is good. And it's not the fact that young people can learn faster than older one. I was only 18 when I reached here. Even after I came out from poly, my english was still bad. How did I improve my english? Well, in order to go for further study, I gotta learn Toefl and SAT (I was thinking to go out from S'pore for my further study at that time). So,that is the reason.Don't be suprised that some of my classmates are still using Singlish till now. I have another point of view for studying Master (It's my thinking. It can be wrong and I am gonna talk about engineering only because I am in engineering field)If you wanna study master, I think you'd better study Research(M.E). You can really learn it and you can dream of your promotion, higher position,better salary and your life journey. If you wanna go for Coursework, I think you are wasting time. Because in s'pore, some companies(not all) don't really appreciate Coursework Master (M.Sc) in some of the engineering fields. They may pay you same salary as graduate from Local Uni. But unfortunately, many myanmar studtens have to take coursework in order to get to study in Local Uni and I do agree that it's the better way to get PR securely. Honestly, it's not easy to go for Research also. Even local graduates must obtain at least 2nd lower to apply for Research in NUS. I am not sure about NTU.
(^_^) I'm alsoaPOly student .....as da comment in Polystudent 8/5/09 1:29 am.....
I agree with him/her totally.....I'm also in the same situation....I got to singapore with my 10th standard results...
With respect to the improvement in English, I think it has nothing to do with my poly student life.....My class hasalot of chinese classmates and now Chinese become the major communication tool between us...On top of that, i am also an engineering student, so, i don't have much chance to get exposed to speak in english...I can speak Chinese pretty well like native chinese already..this is the only thing that i think I've improved much.--my chinese pronunciation I mean...
For English, i think my language is still far behind others..still the same level as it was in2years ago...No improvement at all...In opposite, now i become more and more get used to broken grammar..... :)
Really need to leave an hour or2everday for IELTS .... :) (for self-study)
All in all, in my view, no matter whether we areaundergrat student from NUS(let's say come from Poly) orapost graduate student.... , we all are the same.....we all grew up under the same non-English speaking environment.....
Whether our English is smart or not maybe based onalot of factors, like individuals' hardwork, one's childhood learning environment, and so on.... Just try our best to keep up with native English speakers.. =) .... All in all, life isanever-ending learning journey... Enjoying every single day is the best :P
I came to SG after my 10th standard . Now I m in Poly . Don't think that time ( staying in abroad , esp SG ) can make us to improve our english . I have been in Poly 12.35 months , yet i cannot communicate well in both english and mandarain . Coz my classmates only use Mandarain in class . I have no chance to talk in English . Only time i speak in English is "Presentation" & asking problems to teachers . As time pass thru , i improve only in listening skill of madarain language + some stupid singlish ( i try not to use as much as i can ) . As i m fm engineering , it isavery rare chance to enchance my writing skill . So, i take it as it is only me who have to reponsible "to improve all my English .... skills " as I have no choice ......
6 comments | FLAGS: Singapore
ကျွန်တော့် ငယ်သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ကိုနီလင်းရဲ့ MCSE နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းကို အောက်မှာ ပြန်လည် ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။ ကိုနီလင်းဟာ လက်ရှိ စင်္ကာပူမှာ လုပ်ကိုင်နေတာဖြစ်ပြီး မြန်မာပြည်မှာလည်း British Council မှာ Networking နဲ့ ပတ်သက်ပြီး လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ရန်ကုန်မှာ Information Beam ဆိုတဲ့ သင်တန်းကျောင်း တစ်ခုလည်း ဖွင့်ထားပြီး အဲဒီမှာလည်း သင်ကြားပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီဘလော့ကနေ တဆင့် ဒီလို ပြန်လည် ဝေမျှလိုသူများကိုလည်း ကြိုဆိုပါတယ်။
ကျွန်တော်က Microsoft System Engineer တစ်ယောက်ပါ။ MCSE အနေနဲ့ အလုပ် လုပ်နေတာကလည်း ၅ နှစ်လောက် ရှိပါပြီ။ ဒါမတိုင်ခင်ကလည်း ICT နယ်ထဲမှာ အလုပ်တွေလုပ်ခဲ့တာ တွေရှိပါတယ်။ System Engineer တစ်ယောက်အနေနဲ့ အပြင် MCSE နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သင်တန်းလေးတွေ ပို့ချခဲ့ဖူးသလို၊ MCSE စားမေးပွဲ ဖြေမယ့်သူတွေကိုလည်း Guide လုပ်ပေးခဲ့ တာတွေ လည်း လုပ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် MCSE စာမေးပွဲတွေ၊ MCSE Certificate တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကျွန်တော် အတော်လေး အကျွမ်းတ၀င်ရှိနေပါပြီ။
ကိုယ်လုပ်နေတဲ့ အလုပ်အရရော၊ စာသင်ခဲ့ဖူးတဲ့ အတွေ့အကြုံအရပါ MCSE ပက်သက်ပြီး မေးကြ မြန်းကြတာတွေ ရှိပါတယ်။ မေးတဲ့သူ အများစုက လူငယ်တွေပါ။ သူတိုက MCSE အပါအ၀င် CCNA ၊ CCNP အစရှိတဲ့ Professional Certificate နဲ့ပက်သက်တဲ့ စာမေးပွဲတွေ ဖြေသင့်သလား၊ မဖြေသင့်ဘူးလား။ အဲ့ဒီ Certificate တွေကရော တန်ဖိုး ရှိရဲ့လား၊ အချိန် ငွေကြေး ဘယ်အတိုင်းအတာလောက် အထိ စိုက်ထုတ်ဖို့လိုသလဲ စသည်ဖြင့် မေးတတ်ကြပါတယ်။ သူတို့အနေနဲ့ Professional Certificate အနေနဲ့ ရအောင် ကြိုးစားရာမှာ လိုအပ်တဲ့ ရင်းနှီး ပေးဆပ်မှုလေးတွေကို သိချင်ပုံရကြသလို ဒီလို Certificate တွေကနေတဆင့် ရလာနိုင်မယ့် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းပေါ်ကို အားကိုးတကြီးနဲ့ မျှော်လင့်ကြပုံရပါတယ်။ မေးခွန်းတွေကလည်း အတော်လေး စုံပါတယ်။ တချို့ဆိုရင် တက်လက်စ တက္ကသိုလ် ဆက်မတက်တော့ဘဲနဲ့ ဒီလို Certificate သင်တန်းတွေကိုပဲ အားစိုက်ပြီးတက်ဖို့ စဉ်းစားထားတယ် လို့တောင် ပြောကြတာတွေ ရှိပါတယ်။
ဒါကြောင့်ဘဲ ဒီဆောင်းပါးလေး ရေးမိတာပါ။ ဒီလို Certificate တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ သိလိုတဲ့ မေးခွန်းတွေကို အခုဆောင်းပါးလေးက အတော်လေး အထောက်အကူဖြစ် မယ်လို့ ရိုးသားစွာ ယုံကြည်ပါတယ်။ ကျွန်တော် တင်ပြတဲ့ အချက်အလက်တွေလည်း သဘော မတူနိုင်တဲ့သူတွေ လည်းရှိနိုင်ပါတယ်။
(၁) MCSE Certificate တွေရဲ့ Accreditation ကအရင်ကလောက် မရှိတော့ပေမယ့် ICT နယ်ပယ်မှာတော့ အလေးထား လက်ခံနေသေးတဲ့ Certificate တစ်ခုပါ။
MCSE Certificate တွေ ဟိုတချိန်က (လွန်ခဲ့တဲ့ လေးငါးနှစ်လောက်ကအထိ) အဆင့်မြင့် Certificate လို့ ICT လောကမှာသတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ MCSE Certificate ကိုရတဲ့သူအရေ အတွက်ကလည်း အတော်လေး နည်းနေပါသေးတယ်။ သို့ပေမယ့်အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ MCSE Certificate ရတဲ့သူတွေအတော်လေး များလာလိုက်တာအခုဆိုရင်ကမ္ဘာပေါ်မှာ Certificate Holder ပေါင်း လေးသိန်းကျော်တောင်ရှိနေပါပြီ။ သို့သော်လည်း MCSE Certificate Holder အားလုံးကတော့ MCSE အနေနဲ့ အလုပ် လုပ်နေကြတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ICT Field မှာ အရင့်အရင် လုပ်နေတဲ့ အချို့က MCSE အဆင့် မဟုတ်ကြတော့ပါဘူး။ System Engineer တွေထက် ပိုပြီးအဆင့်မြင့်တဲ့ Technical Director တွေ Vice President အဆင့်တွေမှာ လုပ်နေကြပါပြီ။ တချို့ကလည်း ICT Field ထဲမှာမလုပ်ကြတော့ပါဘူး။ နိုင်ငံခြားမှာ ICT နဲ့ပက်သက်တဲ့ Professional တွေက အမြဲတမ်း လိုအပ်နေတော့ MCSE Certificate Holder အနေနဲ့ အလုပ်လျှောက်ရာမှာ MCSE Certificate ရဲ့ အရေးပါမှုကတော့ အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ ရှိနေသေးတယ်လို့ဘဲ ဆိုရမှာပါ။
(၂) တက္ကသိုလ်ပညာရေးနဲ့ Professional Certificate ဘယ်ဟာက ပိုကောင်းသလဲ။ (ဘယ် ဟာ အလုပ်ရဖို့ ပိုလွယ်သလဲ)
တကယ်တော့ ဒီ နှစ်ခုက ယှဉ်ရမယ့် အရာကို မဟုတ်တာပါ။ ဆိုခဲ့သလိုဘဲ ဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တက်လက်စ တက္ကသိုလ်တွေကို ရပ်ပြီး MCSE Certificate Course ပဲ လုပ်တော့မယ်လို့ ဆိုတဲ့ သူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ Professional Certificate တွေသည် လုပ်ငန်းခွင် ၀င်နိုင်ဖို့အတွက် ကျွမ်းကျင်လက်မှတ် များသာ ဖြစ်ပြီး ဘွဲ့၊ ဒီကရီများ မဟုတ်ပါ။ ဒါ့ကြောင့်လည်း Certificate လို့ခေါ်တာပါ။ ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ Master တွေ Ph.D တွေကျတော့ နက်နဲတဲ့ သုတေသနလုပ်ငန်း တွေ Network Protocol တွေ ပြင်ဆင်တာ၊ OS အသစ်တွေထုတ်တာ၊ Search Engine တွေ တီထွင် ထုတ်လုပ်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေ) မှာ အလွန် အသုံးဝင်ပါတယ်။ ဒီနေ့ရာမှာ မေးစရာ မေးခွန်း တစ်ခုရှိပါတယ်။ System Administrator တစ်ယောက် အနေနဲ့ အလုပ်ရဖို့ ဘွဲ့လိုသလား၊ ဆို တဲ့မေးခွန်းပါ။ အခြေအနေပေါ် မူတည်တယ်လို့ ပြန်ဖြေရမှာပါ။
Network Architect ဖြစ်ဖို့၊ Project Implementation Architect ဖြစ်ဖို့အတွက် ကျတော့ CCIE CISCO Certified Internetwork Expert၊ MCA (Microsoft Certified Architect) တွေက ပိုပြီး အသုံးဝင်ပါတယ်။ သူတို့မှာ လိုအပ်တဲ့ အတွေ့အကြုံနဲ့ Certificate Course ကပေးတဲ့ Knowledge တွေရှိပါတယ်။
ကျွန်တော့ အတွေ့အကြုံအရ တက္ကသိုလ်က ပေးလိုက်တဲ့ ဘွဲ့၊ ဒီပလိုမာတွေက အနည်းဆုံး တော့ Work Permit တွေ Employment Permit တွေလျှောက်ရာမှာ လုံးဝ (လုံးဝ) လိုပါတယ်။ (အထူးသဖြင့် စင်္ကာပူမှာအလုပ်မယ့်သူများ)။ သို့ပေမယ့် အလုပ်လျှောက်ရာမှာတော့ Certificate တွေမရှိရင် အင်တာဗျူးခေါ်ဖို့က မလွယ်ပြန်ပါဘူး။ ဒါဆိုရင် ဘွဲလည်းရှိပြီ၊ Professional Certificate ရှိပြီဆိုရင်ရော အလုပ်ရမှာလားဆိုရင် မသေချာဘူးလို့ဘဲ ပြောရမှာပါ။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ Certificate ရှိပြီး လုံလောက်တဲ့ အလုပ်အတွေ့အကြုံ (Work Experiences) မရှိတာ၊ လိုအပ်တဲ့ လုပ်ငန်းခွင်ဗဟုသုတ (Knowledge) မရှိရင် ရထားတဲ့ Certificate က အလုပ်ရဖို့ ဘာမှ အာမခံချက် မရှိပါဘူး။ ဒီနေရာမှာ အရေးကြီးတာက Certificate ရှိရုံနဲ့ အလုပ်ရဖို့ မလုံ လောက်ဖူးဆိုတာကို ထပ်လောင်းအသိပေးပါရစေ။
ကိုယ်ဘက်က အလုပ်အတွေ့အကြုံ မရှိသေးရင် ကိုယ့် (Knowledge) ကို ခိုင်သထက်ခိုင်မာ အောင်တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ အတတ်နိုင်ဆုံး လက်တွေ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေ များများ လုပ်ဖို့ အကြံပြုလိုပါတယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် MCSE Certificate Holders အတော်များများနဲ့ ဆုံဖူးပါ တယ်။ဆုံလို့ ၁၀ မိနစ်လောက်ထိုင်ပြီး MCSE အကြောင်းစကားပြောကြည့်လိုက်ရင် သူတို့ရဲ့ ကျွမ်းကျင်မှု အခြေအနေကို အကဲခတ်လို့ ရနိုင်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားမှာရှိတဲ့ Employers တွေ၊ Hr Professional တွေက အတော်လေး ပါနပ်တဲ့သူတွေဖြစ်လို့ သူတို့တွေလည်း အလွယ်တကူပဲ သိကြမှာပါ။ ဒါကြောင့်လည်း Professional Certificate Course တွေပဲ တက်မှာမို့တက္ကသိုလ် ဆက်မတက်တော့ဘူးဆိုတဲ့ အတွေးအခေါ်ကို လုပ်သင့်တဲ့ အလုပ်လို့ ကျွန်တော် လုံးဝ မယုံကြည်ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဆိုခဲ့သလိုဘဲ MCSE Certificate က လုပ်ငန်းခွင် ကျွမ်းကျင်မှု အောင်လက်မှတ် အဆင့်ပဲ ဖြစ်ပြီးတော့ ဘွဲ့၊ ဒီကရီတွေကတော့ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ လေ့လာမှု အတွက် သတ်မှတ်ထားတဲ့ အတိုင်းအတာတစ်ခုကို အောင်မြင်ကြောင်း သက်သေခံတဲ့ အထောက် အထားပါ။ လုပ်လို့မရလို့ မဆိုလိုသော်လည်း အတော်လေး ခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ လုပ်မှရနိုင်မယ့် အခြေ အနေမှာရှိပါတယ်။ နာမည်ကျော်တက္ကသိုလ်ကြီး တစ်ခုခုမှ Ph.D ရဖို့ နှစ် အတန်ကြာအောင် လေ့လာဆည်းပူး၊ သုတေသနတွေ လုပ်ဖို့လိုအပ်သလိုပါဘဲ၊ Doctorate Of Networking လို့ သမုတ်ကြတဲ့ CCIE တစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ အနည်းဆုံး လေးငါးနှစ်လောက် မြှုတ်နှံပြီး ကြိုးစား အားထုတ် အလုပ်တွေ လုပ်ခဲ့တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီလို အခြေအနေတွေ မရှိသေးဘူး၊ မရှိနိုင်သေးဘူး ဆိုရင် တော့ ဒီ Field မှာ ဘယ်လိုဆက် လုပ်သင့်လဲဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်သင့်ပါတယ်။
(၃) MCSE Certificate Holder ဖြစ်ရန် မခက်ပါဘူး။ မေးခွန်းဟောင်းတွေ Internet မှာရနိုင် ပါတယ်။
မှန်ပါတယ်။ MCSE Certificate Holder ဖြစ်ရန် မခက်ပါဘူး။ မေးခွန်းဟောင်းတွေလည်း Internet မှာ ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် MCSE Certificate Holder တစ်ယောက်ဟာ Certificate ကိုင်ထားရုံ၊ တနည်းအားဖြင့် စာမေးပွဲ အောင်ထားရုံနဲ့ System Engineer (လုံးဝ) မဖြစ်သေးပါဘူး။ ထပ်ပြီး ပြောရရင် MCSE Certificate ဟာ System Engineer တစ်ယောက် ဖြစ်ဖို့အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ Certificate တစ်ခုဖြစ်ပေမယ့် ဒါဟာ လိုအပ်ချက်တွေ အများ အပြားထဲ့က လိုအပ်ချက်တစ်ခုသာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော် MCSE တစ်ယောက်အနေနဲ့ရော၊ MCSE Course Trainer တစ်ယောက်အနေနဲ့ပါ အလုပ် လုပ်လာတဲ့ သက်တမ်းတစ်လျှောက်မှာ MCSE On Paper တွေ အတော်လေး တွေ့ခဲ့ဖူးပါတယ်။ MCSE Certificate တော့ ရပါရဲ့ ဒါပေမယ့် System Engineering နဲ့ပတ်သက်လို့ Professional အဆင့် မရှိသေးတဲ့ သူတွေ တွေ့နေရပါတယ်။ ဒါနဲ့ ပက်သက်လို့ ကျွန်တော် စဉ်းစားမိတဲ့အချက်လေး တွေကို ပြန်ဖောက်သည်ချပါရစေ။
ပထမအချက် ကတော့ Professional Vendor သင်ရိုးတွေဟာ လက်တွေ့ လုပ်ငန်းခွင် အတွေ့အကြုံကို အပြည့်အ၀ မပေးနိုင်ပါဘူး။ ဒါကလည်း ထူးဆန်းတဲ့ ကိစ္စ မဟုတ်ပါဘူး။ သတ်မှတ်ထား တဲ့ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွေ ကိုယ်၌ကိုက Skill Based ဆိုတာထက် Exam Based ပိုဖြစ်နေလို့ ပါ။ ဒီနေရာမှာ ထပ်ပြီး တွေ့တဲ့အချက်က ဘယ်လို Training Center တွေ တက်သလဲဆိုတာလည်း အရေးကြီးတဲ့ အချက်တစ်ခုပါ။ ကျွန်တော် သင်တန်းပေးတဲ့ အချိန်တုန်းက ကိုယ်တိုင်ကလည်း MCSE တစ်ယောက်ဖြစ်နေတော့ ဒီလိုအပ်ချက်လေးကို ကောင်းကောင်း သတိပြုမိပါတယ်။ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းကို အကောင်းဆုံး၊ အကြေညက်ဆုံး ဖြစ်အောင်သင်ပေးပေမယ့် တချိန်တည်းမှာဘဲ လက်တွေ့ လုပ်နိုင်တဲ့ အခြေလေးတွေကိုလည်း သင်တန်းမှာ အတက်နိုင်ဆုံး ဖန်တီးပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါတောင်မှ သင်တန်းက ပေးလိုက်တဲ့ ``သင်တန်း လက်တွေ့ အတွေ့အကြုံ´´ပဲ ရှိပါသေးတယ်၊ ``လုပ်ငန်းခွင် လက်တွေ့ အတွေ့အကြုံ´´ မဟုတ်သေးပါဘူး။ သို့ပေမယ့်လည်း သင်တန်း အတော်များများကတော့ စာမေးပွဲ့ကို ဦးစားပေးပြီး သင်ကြတာ တွေ့ရပါတယ်။
တကယ့် လက်တွေ့ အတွေ့ကြုံဆိုတာကတော့ Customer တွေနဲ့ ပြဿနာပေါင်း တစ်သောင်း ခြောက်ထောင်လောက် ရှင်းရင်းနဲ့၊ ဒါမှမဟုတ်ရင် အမှန်ကန် Project တစ်ခုကို ကိုယ်တိုင် အစ အဆုံးဝင်လုပ်ယင်းနဲ့သာ ရနိုင်ပါလိမ့်တယ်။ ဒီလို ပြောလို့ Certificate မလိုအပ်လို့ဆိုလိုတာ မဟုတ်ပါဘူး၊ (အလုပ် လျှောက်ဖို့အတွက်၊ လက်တွေ့ လုပ်ငန်းခွင်မှာ အဆင်ပြေဖို့အတွက်) မလုံလောက်သေးဘူးလို့ ဆိုချင်တာပါ။ ဒါ့ကြောင့်လည်း MCSE Course သင်တန်းတွေ တက်နေချိန် မှာ လက်တွေ့ အတွေ့အကြုံတွေ များနိုင်သမျှ များအောင် ကြိုးစား အားထုတ်စေချင်ပါတယ်။ ဒီနေမှာ အသိပေးချင်တဲ့ အချက်တစ်ခုက Network အခြေခံဗဟုသုတ ကောင်းကောင်းရှိတဲ့ လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ မေးခွန်းဟောင်းတွေ လေ့လာပြီး ဖြစ်နိုင်တဲ့ အဖြေတွေ ကောင်းကောင်း အလွတ်ကျက်နိုင်ရင် MCSE Certificate ကို ၃ လအတွင်းရနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်မို့ MCSE Certificate Exam ဖြေမယ်ဆိုရင် Paper MCSE တွေမဖြစ်စေဖို့ ကျိုးနွံ့ စွာပဲ တိုက်တွန်းပါရစေ။ အဲ့သလိုမဟုတ်ရင်တော့ လုပ်ငန်းခွင် ၀င်ပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်းကြုံလာမယ့် အကျိုးဆက်တွေ ရင်ဆိုင်ကြရပါလိမ့်မယ်။
(၄) MCSE တစ်ယောက်အနေနဲ့ဘ၀ ရပ်တည်နိုင်ပါသလား။ ခိုင်မာတဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အလုပ်တစ်ခုလား ။
ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ MCSE နေနဲ့ ရပ်တည်နေတဲ့ မြန်မာတွေ (ကျွန်တော် အပါအ၀င်) ရှိပါတယ်။ သို့ပေမယ့် MCSE Certificate တစ်ခုတည်းနဲ့တော့ လုံးဝ မရပါဘူး။ လုပ်ငန်းခွင်မှာ ရေရှည် ရပ်တည်ဖို့ အတွက်ကတော့ ကြိုးစား အားထုတ်မှု၊ စဉ်ဆက်မပျက် သင်ယူနေမှု၊ အလေ့အကျင့်နဲ့ အတွေ့အကြုံတွေက အမှန်တကယ် လိုအပ်ပါတယ်။ ဆိုခဲ့သလိုဘဲ MCSE Certificate ကိုင်ထားရုံတော့ System Engineer မဖြစ်သေးပါဘူး။ ဘယ်သင်တန်းကျောင်းမှလဲ အကုန်တတ်အောင် ပြည့်စုံအောင် သင်မပေးနိုင်ပါဘူး။ ကာယကံရှင်ရဲ့ တစိုက်မတ်မတ် ကြိုးစားအားထုတ်မှု ပေါ်မှာသာ မူတည်ပါတယ်။
ကျွန်တော့် ကိုယ်ပိုင် အနေနဲ့ကကော MCSE တစ်ယောက်အနေနဲ့ ထိုက်တန်တဲ့ နေရာတစ်ခုမှာ ရှိနေတယ်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယူဆတဲ့အတွက် MCSE Certificate Course တွေ လုပ်ခဲ့တာ မှန်ကန်တဲ့ ရွေးချယ်မှုလို့ ခံစားမိပါကြောင်း ...
12 comments | FLAGS: IT